Phoe Tat Pu Episode – 14 – PVTV Myanmar
·4months ago ·30 Comments
2021-09-15 at 12:57 PM
အရေး တော် ပုံအောင်ရမည်
2021-09-15 at 1:20 PM
2021-09-15 at 2:11 PM
2021-09-15 at 2:15 PM
waidar yuu says:
2021-09-15 at 3:08 PM
2021-09-15 at 3:14 PM
Cho That says:
2021-09-15 at 3:15 PM
2021-09-15 at 3:22 PM
wine Lay says:
UN . အာဆီယံ . ေဘာလီေဘာပုတ္ပြဲ က အခု UN ဘယ္လိုဆက္ပုတ္မလဲၾကည့္ရအံုးမယ္
Ye Min aung says:
2021-09-15 at 9:28 PM
Zaw Lunn Aung says:
Phaunghi Naungethamor says:
2021-09-16 at 11:34 AM
2021-09-16 at 12:31 PM
Of course, we're going to be win for sure in this time.
2021-09-17 at 10:34 AM
2021-09-17 at 4:34 PM
2021-09-23 at 1:03 AM
"နွေဦးတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ရမည် " "အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်" 💣🔫🧨🗡⚔️🏹
2021-09-23 at 1:04 AM
โช โช มา says:
2021-09-24 at 11:04 AM
2021-10-08 at 6:29 PM
2021-11-04 at 7:07 AM
မြန်မာ ပြည်ကို ပြိုကွဲ အောင်လုပ်နေတာဘယ်သူလဲ…
မြန်မာ့ တပ်မတော် ကိုဂုဏ်သိက္ခာညှိုးနွမ်း ပြိုကွဲ အောင်လုပ်နေတာဘယ်သူလဲ…
မြန်မာ့ တပ်မတော် သားတွေ..
တန်ဖိုး မဲ့စွာသတ်ခံ ရတာကို
မြန်မာ ပြည်သူ အများစုက
မြန်မာ့ တပ်မတော် သားများ
အာဏာရူး.. အတ္တ သမား
ဦးနှောက်မဲ့စွာ..ပြည်သူ့ အာဏာကို ဒပြတိုက်..လုယူခဲ့လို့ ဖြစ်ခဲ့တာ..
မြန်မာ့ တပ်မတော် သား..ရဲဘော်..ညီအကိုများ..
ဦးနှောက် မဲ့ တဲ့..အတ္တသမား
ကိုယ်ကြိုး ရှာ..ဗိုလ်ချုပ် တွေ..
ပြည်သူ့ အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ်ကို..ဖျက်ဆီး ရန်..အမိန့်ပေးသော..အရာရှိ.. အကြပ်တပ်သားများ ကို..ဖမ်းချုပ်ကြ..ပစ်သတ်ကြ… ပြည်သူ့ အကြိုး ကို ပျက်စေသော..အာဏာမှန် သမျှ ဖီဆန်ကြ..
တိုးတက် သော ဒီမိုကရေစီ မြန်မာ နိုင်ငံ တော်မှာ..တန်ဖိုး ရှိတဲ့..ပြည်သူ့ တပ်မတော် ဝန်ထမ်း..အဖြစ် ဆက်ရှင် သန်နိုင် ဖို့…ကိုယ်တပ် ထဲမှာ ဘဲကိုယ်နေ..တပ်ပြင် ထွက် တိုက်ခိုင်း တဲ့..အရာရှိတိုင်း ဟာ..
ကိုယ့်ကို သေခိုင်းနေတာ ဖြစ်လို့..
ဒီ အရာရှိတွေ ကို..အချုပ်ချ ထားလိုက်..မရရင်..ပစ်သတ်လိုက်..
မြန်မာ့ တပ်မတော် ကို..စစ်မှန်တဲ့ ပြည်သူ့ တပ်မတော် ဖြစ်အောင်..
မြန်မာ ပြည်ရဲ့ စစ်မှန် တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဟာ..သေနတ်ကိုင် နေတဲ့..
ရဲဘော်တို့ အားလုံးရဲ့..တဦးတယောက် စီရဲ့ လက်ထဲမှာ..ရှိတယ်..
အထက် က အမိန့် ပေးတိုင်း
လုပ်ရ မှာ မဟုတ်ဖူး…
ငါတို့ ဟာ လူတွေ..ဦးနှောက် ရှိတယ်..ကိုယ် ပိုင်စိတ် နဲ့..ခံစားချက် ရှိတယ်..လုပ်သင့်..မလုပ် သင့်..ပိုင်းခြား သိတတ် တဲ့ လူတွေ ဖြစ်တယ်…
ပြည်သူ ကမွေးဖွား လာတဲ့ ပြည်သူ့ တပ်မတော် ဟာ..ပြည်သူ ကိုကာကွယ် ဖို့..ဖြစ်တယ်..ပြည်သူ့ အသက် အိုးအိမ် စည်းစိမ် ကို ဖျက်ဆီး ဖို့ပေးတဲ့..အမိန့်..အာဏာမှန်သမျှ ဖီဆန်ကြ..
ပြည်သူ က…ရွေလျား တပ်တိုင်းကို..ရန်သူ အဖြစ် သတ်မှတ် ထားတယ်..ဒါကြောင့်.. မိမိတပ် တွင်းမှာ သာမိမိ နေကြပါ..
ပြည်သူ တွေကို မသေစေချင် သလို..တန်ဖိုး ရှိတဲ့…Professional မြန်မာ့ တပ်မတော် သားများ ကိုလဲ မသေစေချင် ပါ..
တင့်ကား ကြီး ကို မဖျက်ချင် ပါ..
တင့်ကား ကို ဂျောက်ထဲ မောင်းချနေတဲ့…သူခိုး ဗိုလ်ချုပ် များ ကို
ဖမ်းဆီး အရေးယူ.. ပြီး..ပြည်သူ့ အာဏာ..ပြည်သူ့ လက်ထဲ ပြန်ရောက် ရေးသည်သာ..ငါတို့ ရဲ့
အဓိက.. ဆန္ဒ ဖြစ်ကြောင်း..
မြန်မာ့ တပ်မတော် သားများ နားလည် စေချင်ပါတယ်..
မြန်မာ ချင်း..ညီအကို ချင်း..
မသတ်ချင် ပါ..ဘယ်သူ သေသေ
အိမ်ကြက် ချင်း အိုးမဲသုတ်..အခွပ် ခိုင်းနေတဲ့..မအလ/စကစ
နဲ့ သူထောက် တိုင် အရာရှိ..
အရာခံ အကြပ် တပ်သား..အားလုံး ကို..ဖမ်းဆီး
အချုပ်ချ ခြင်း ဖြင့်..ပြည်တွင်းစစ်ကို..အမြန် အဆုံး သတ်အောင် ကူညီရင်း..မြန်မာ့ တပ်မတော် မှ
စစ်မှန် တဲ့..ပြည်သူ့ တပ်မတော် အဖြစ်..အခုပဲ.. ကူးပြောင်း လိုက်ကြပါ…
ပြည်သူ့ တပ်မတော် ဦးဆောင်လမ်းညွှန် ကော်မီတီ..